DAAWO:Wasiirka Qorsheynta Puntland oo daah furay mashruuca maamulista Biyaha & Khayraadka Badda – DMS
HomeWararkaDAAWO:Wasiirka Qorsheynta Puntland oo daah furay mashruuca maamulista Biyaha & Khayraadka Badda
DAAWO:Wasiirka Qorsheynta Puntland oo daah furay mashruuca maamulista Biyaha & Khayraadka Badda
19th March 2019 editor
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa daah furay mashruuca maamulista biyaha iyo khayraadka badda Puntland, kaas oo ay iska kaashan doonaan hirgelintiisa wasaaradaha Qorsheynta, Biyaha, macdanta iyo tamarta, xanaanada xoolaha, deegaanka, beeraha iyo waraabka Puntland iyo sidoo kale Hay’adda FAO.
Mashruucani oo socon doona muddo saddex sano ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa qaabka loo maamuli doono biyaha iyo khayraadka badda Puntland, waxaana Puntland ka gacansiinaya Hay’addo caalami ah kuwaas oo kala shaqayn doona maamulista iyo ka faa’iidaysiga biyaha iyo khayrada badda Puntland.
“Halkan waxaan iskugu nimid in aan ku daah furno mashruuc ku saabsan maamulista biyaha iyo khayraadka badda Puntland iyo xogta la xiriirta qaabka loo maamulayo, mashruucaas oo socon doona saddex sano oo ka bilaabanaya 2019 – 2021 ku eg waa mashruuc aan rabno in loo maamulo sidii mashaariicdii hore oo kale oo maamuli jiray si ka duwan oo lagu soo wareejiyo dowladda Puntland” Sidaasi waxaa yiri wasiirka Qorsheynta Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo daah furay mashruucani maanta.
Wasiirka wasaaradda Qorsheynta, horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa daah furay mashruuca maamulista biyaha iyo khayrada badda Puntland, kaas oo ay iska kaashan doonaan hirgelintiisa wasaaradaha Qorsheynta, Biyaha, macdanta iyo tamarta, xanaanada xoolaha, deegaanka, beeraha iyo waraabka Puntland iyo sidoo kale Hay'adda FOA.
Posted by Dalmar Media on Tuesday, 19 March 2019
Wasiir Xaange ayaa mar uu ka hadlayey wasaaradaha wada fulin doona mashruucani iyo muhiimada uu leeyahay ayuu yiri “Waxaa wada fulin doona wasaarado dhowr ah oo ay kamid tahay wasaarada Biyaha, macdanta iyo tamarta, wasaarada Deegaanka, beeraha iyo waraabka, wasaarada Qorsheynta, wasaarada Xanaanada xoolaha, waxaa la dhisi doonaa hadii illaahay idmo xarun lagu kaydiyo laguna ururiyo xogta qusaysa biyaha, dhulka iyo macdanta”.
Wasiir Xaange ayaa dhanka kale sheegay in mashruucani looga faa’iidaysan doono siyaasada, dhaqaalaha, horumarinta iyo maamulistabiyaha iyo khayraadka badda Puntland, isagoona xusay in go’aan qaadashada mashruucani ay iska leedahay dowladda Puntland.
Ugu dambeyntii ayaa waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah masuuliyiinta Hay’adda FOA oo mashruucani fulinaysa, waxaan ay sheegeen in mashruucani uu muhiim u tahay shacabka iyo dowladda Puntland kuna faraxsan yihiin imaanshahooda Puntland.
DAAWO:RW Khayre oo ka hadlay ciidamo mushahar la’aan ka cabanaya
DAAWO:Madaxweyne Denni oo qaabilay Ehelada Caa’isha Ilyaas Aadan